Iindaba zomculo ezi-6 onokumamela kulo Matshi | IBezzia
Iincwadana ezi-6 zomculo onokumamela kulo Matshi
UMaria vazquez | | Iindaba, isiko
NgoFebruwari odlulileyo ibiyeyokuqala esabelana nawe ngezinye zeendaba zomculo ezaziza kuza. Kule nyanga, siyaphinda, ngezindululo ezintlanu ezingenanto encinci okanye ezingenanto yakwenza nomnye umntu ngaphandle kokuba ikhutshwe ngalo Matshi. Bafumanise!
1 Xa uzibona-Amakhosi kaLeon
2 Kwabo bazalwe mva-iRaemon eNtsha kunye noDavid Cordero kunye noMarc Clos
3 Ikrimu-Enye intle
4 I-Chemtrails ngaphezulu kweklabhu yelizwe-uLana del Rey
5 Amaphupha kaDalí - uPaloma Mami
Xa uzibona-Amakhosi kaLeon
Iikumkani zikaLeon ziya kukhupha ialbhamu yazo yesibhozo, Xa uzibona, ngoMatshi 5 ozayo. Ingqokelela yeengoma ezili-11, esele sikwazile ukumamela umjukujelwa, abantu abayi-100,000 kunye noKuncoma; isampulu encinci yento esiza kuyifumana kule albhamu intsha kwinqanaba lesandi.
Kwakumelwe odumileyo Izitudiyo zaseNashville Blackbird Iveliswe yi-Grammy Award winner uMarkus Dravs, le yinto yokuqala yebhanti okoko iindonga zakhutshwa ngo-2016. Iya kufumaneka kwiCD, vinyl, nakwimibala yevinyl.
Kwabo bazalwe mva-iRaemon eNtsha kunye noDavid Cordero kunye noMarc Clos
Kwabo bazalwe kamva kunjalo irekhodi ebhalwe ngezandla ezintandathu Ukuvalelwa ngokupheleleyo yiRaemon eNtsha, uDavid Cordero kunye noMarc Clos. Ialbham enezingoma ezili-10 eziza kukhutshwa nge-12 kaMatshi kwaye esele sikwazile ukumamela elona candelo libi njengelokuqala elinye.
«Ingoma eqaqambe kakhulu kwi-albhamu ... kwaye ndicinga ngeendlela ezimbalwa: Inkqubo entle, izandi ezingahleliwe njengengoma ekhatshwa nguMarc emva kokumamela iirekhodi ezilungileyo zeKraftwerk kunye noculo olumnandi kakhulu uRamón phakathi kwayo yonke into. Ukubulela umhlobo wam olungileyo uDani (ichaphaza lekhasethi) ngentsebenziswano yakhe kunye neentaka zommelwane wam ngokuzivumela ukuba zirekhodwe ngengoma epheleleyo.
UCrema licwecwe lesine likaTu otra bonita, ingqokelela yeengoma ezili-13 nge uthotho olude lokusebenzisana phakathi kwazo ezo zeMacaco, uJuanito Makandé, uMiguel Campello, uLa Pegatina okanye uTravis Birds. Njengomboniso, ungasele umamele iNyaniso, i-Upside Down, i-Cure yam nge-Vic Mirallas, ihashe elimhlophe nge-Macaco, ukulala kunye neTravis Birds kunye nokudibana neBite.
Iveliswe nguCampi Campón Kunye noTomas Tirtha, uJuanito Makandé noPaco Salazar, izakuba ngomhla we-12 kweyoKwindla apho uya kuba nakho ukumamela icwecwe lelinye lawona maqela eclectic kwindawo yesizwe. Awunakulinda? Ushicilelo langaphambi koku-odola lubandakanya i-CD yebhonasi "Esto es crema" eneengoma ezi-9 ezivela kwi-albhamu "Crema" kunye nengoma engakhutshelwanga "Isiqingatha".
I-Chemtrails ngaphezulu kweklabhu yelizwe-uLana del Rey
I-albhamu entsha kaLana del Rey, iChemtrails ngaphezulu kweklabhu yelizwe, yenye yezona zinto zibalulekileyo zomculo kule nyanga kwaye iya kukhutshwa ngoMatshi 19. Iveliswe kwakhona nguJack Antonoff, kuyakubakho ukusikeka okulishumi elinanye okubandakanya. Njengephambili lokuqala, imvumi yasibhaqa ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo Makhe ndikuthande njengowasetyhini, umxholo oqhubeka kuwo ingoma yesihloko.
Ialbham ethatha indawo kwindawo eyaziwayo "uNorman Fucking Rockwell" (2019), ethathelwa ingqalelo njengeyona ibalaseleyo kulo nyaka, iya kuthengisa kwimarike kwiinyanga ezininzi emva komhla oqikelelweyo wokuqala.
Amaphupha kaDalí - uPaloma Mami
USueños de Dalí yeyona albhamu yokuqala yimvumi uPaloma Mami, a Umculi waseChile ozalwe eNew York Oko kubangele isiphithiphithi sibuyele kwi-2018 nge "Not Steady" Kwiminyaka emithathu kamva kwaye abe ngumculi welinye ilizwe, uza kuzisa ngoMatshi 19 ingqokelela yeengoma ezili-11 ngenkqubela phambili enje ngeMami, iGoteo, iYa kunye neReligiosa. Ialbhamu apho afaka khona iintlobo ezinje ngeR & B, umgibe kunye nomphefumlo, esenza isitampu esahlukileyo.
Ukuthi ndonwabe yinto engaphantsi. Eli licwecwe lam lokuqala kwaye ndinomdla wokwabelana ngalo nehlabathi. Ingoma nganye ikuthatha kuhambo olwahlukileyo kwaye ndiyazi ukuba uya kuchonga amava kunye neemvakalelo endinxibelelana ngazo ».
Zeziphi kwezi ndaba zomculo ofuna ukuziva kakhulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » isiko » Iincwadana ezi-6 zomculo onokumamela kulo Matshi
Izimvo zoqobo zemitshato
Izizathu zokuba sifumane iinwele ezingwevu